११ महिनापछि कोरोना संक्रमण दर ओरालो « Naya Page
विज्ञहरू भन्छन्– पहिलो ‘वेभ’ सकिँदै छ, दोस्रो ‘वेभ’को उच्च जोखिम छ
काठमाडौं, १५ पुस । कोभिड– १९ को संक्रमणदर ११ महिनापछि ओरालो लागेको छ । परीक्षण कम भए पनि पाेजिटिभ देखिने दर र अस्पतालमा भर्ना हुने संख्या न्यून हुँदै गएपछि विज्ञहरूले नेपालमा कोभिडको पहिलो ‘वेभ’ सकिन थालेको बताएका छन् । तर, दोस्रो ‘वेभ’को उच्च जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि दोस्रो ‘वेभ’ नियन्त्रणको पूर्वतयारीमा जुट्न थालेको छ । ‘पहिला ‘वेभ’ नियन्त्रणमा आउन लागेको भए पनि दोस्रो ‘वेभ’ को जोखिम उत्तिकै छ । दोस्रो ‘वेभ’ आउन नदिन र आइहाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक तयारीका कामहरू थालेका छौँ,’ स्वास्थ्यसचिव लक्ष्मण अर्यालले भने । उनका अनुसार पछिल्लो समय पाँच सय आइसियू र अक्सिजन जडित दुई हजार बेड थप्ने तयारी भएको छ । ‘यी काम सम्पन्न भए दोस्रो ‘वेभ’ आएको खण्डमा क्रिटिकल केयर व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता देखाउन सक्छौँ,’ उनले भने ।
अस्पतालहरूमा संक्रमित बिरामीको चाप पनि घटेको छ । टेकु अस्पतालका चिकित्सक डा. अनुप बाँस्तोलाले ११ महिनापछि केही राहत मिलेको बताए । ‘विगतको अनुपातमा अस्पतालमा बिरामीको संख्या कम हुँदै गएको छ, धेरै पछि कामको लोड कम भएको छ,’ उनले भने ।
कोसी अञ्चल अस्पतालमा दैनिक एक सय जनासम्म ज्वरोका बिरामी आउने गरेकोमा हाल १० देखि १५ जना मात्रै आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । त्यस्तै, कोभिड परीक्षणका लागि हरेक दिन चार सय नमुना संकलन हुने यो अस्पतालमा अहिले बढीमा ४० जनाजतिको हुने गरेको छ ।
चितवनस्थित भरतपुर कोभिड अस्पतालमा पनि बिरामीको संख्या घटेको छ । यहाँ ८० जनासम्म संक्रमित भर्ना भएका थिए, तर अहिले १० जना मात्रै भर्ना छन् । ‘दैनिक ४५ देखि ६० जनासम्म ज्वरोका बिरामी आउँथे, बढीमा १० जनासम्म आइरहेका छन्,’ अस्पतालका चिकित्सक डा. जगन्नाथ तिवारीले भने । कोभिड परीक्षणका लागि दैनिक चार सयसम्मको नमुना संकलन हुने यो अस्पतालमा अहिले ७० जनासम्मको भइरहेको छ ।
२६ मंसिरमा सात हजार चार सय १४ नमुना परीक्षण गरिँदा एक हजार ४४ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । २७ मंसिरमा पाँच हजार दुई सय ४२ नमुना परीक्षण गरिएका थिए, जसमा आठ सय ९९ जनामा पजिटिभ देखिएको थियो ।
त्यस्तै २ पुसमा ६ हजार पाँच सय ८८ नमुना परीक्षण गर्दा सात सय ७६ जनामा संक्रमण देखिएको थियो भने ८ पुसमा पुग्दा त्यो संख्या अझै घटेको थियो । त्यस दिन ६ हजार पाँच सय ५९ नमुना परीक्षण गर्दा सात सय ४३ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । मंगलबार ६ हजार एक सय ३५ नमुना परीक्षण गरिएका छन्, जसमा सात सय आठजनामा संक्रमण देखिएको छ ।
हाल ६ जिल्लामा कोभिड केस शून्य छ । एकदेखि ५० केस भएका जिल्ला ५६ र ५१ देखि दुई सय केस भएका जिल्ला १५ छन् । पाँच जिल्लामा दुई सय एकदेखि पाँच सयसम्म संक्रमित छन् भने एक जिल्लामा मात्रै पाँच सयभन्दा बढी संक्रमित छन् । विगतमा ५१ देखि दुई सय सक्रिय संक्रमित भएका जिल्ला ६५ पुगेका थिए ।
भाइरसविज्ञ डा. सन्तोष दुलाल भन्छन्– पुनः संक्रमणको जोखिम उत्तिकै छ
संक्रमित भएर निको भएका व्यक्तिलाई पनि पुनः संक्रमणको जोखिम उत्तिकै हुन्छ । विभिन्न अध्ययनले यसको पुष्टि गरिसकेको छ । अप्रिलमा पहिलोपटक संक्रमण देखिएका अमेरिकाका एक व्यक्तिलाई मेमा फेरि संक्रमण भएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
ती व्यक्तिको भाइरसको आनुवांशिक अध्ययन गर्दा फरक–फरक भाइरस भएको पत्ता लागेको थियो । नेपालमा पनि धेरै मानिसमा पुनः संक्रमण भएको हुनुपर्छ, तर यहाँ भाइरसको आनुवांशिक अध्ययन गरिएको छैन । नयाँ भाइरसले पुनः संक्रमण गराएको हुन सक्छ ।
हाल बेलायतमा नयाँ भाइरस फेला परेको छ । त्यसको संक्रमण तीव्र अर्थात् अहिले देखिएको कोरोना भाइरसको भन्दा तीन गुणा बढी छ । बेलायत हुँदै जर्मनीसम्म पुगिसकेकाले त्यसलाई रोक्न धेरै देशले सुरुवाती चरणबाटै लकडाउन गर्न थालेका छन् ।
नेपालमा कैयौँ मानिस बेलायतबाट आइरहेका छन्, उनीहरूमध्ये धेरैलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । राज्यले उनीहरूको निगरानी गरेको छैन । उनीहरूले अरूलाई सारेको अवस्थामा नेपालमा संक्रमणको दोस्रो ‘वेभ’ सुरु हुने खतरा देखिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट